Etu esi wụnye Igwefoto Google na ihe ọ bụla gam akporo ngwaọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi wụnye Google Camera na ngwaọrụ gam akporo ọ bụla
Ụlọ Ignatius | | android, Aplicaciones
Ngwaọrụ nke pikselụ na-enye anyị ọtụtụ ihe nlegharị anya nke ọtụtụ n'ime gị gha etinyela n'uche na oge mgbe ị nwere mkpa iji megharịa ngwaọrụ gị. Site na mwepụta nke Pixel 3a na 3a XL, ụmụ okorobịa si Google na-enye teknụzụ nke njedebe ha na onu ahia karie ya na maka mmefu ego nile.
Ihe kachasị mma nke Pixels abụghị naanị na ọ na-enye anyị ezigbo gam akporo na-enweghị ụdị nhazi ọ bụla, kamakwa na ọ na-enyekwa anyị ngwa igwefoto mara mma nke anyị nwere ike nweta nsonaazụ dị egwu. Ọ bụrụ na ị naghị ezube ịmegharị mkpanaka gị maka Pixel mana ịchọrọ iji uru foto na-enye anyị, anyị ga-egosi gị otu esi etinye igwefoto Google na ngwaọrụ gam akporo ọ bụla.
All Nsukka na-enye site na ha customization oyi akwa dị iche iche foto ngwa weghara captures. Agbanyeghị, nke na-adọta uche kachasị bụ nke Google n'ihi ọrụ dị egwu emere site na ngwanrọ na njide ọ na-ewe, karịsịa na obere ọkụ gbaa.
O di nwute, emeputara ngwa igwefoto Google ka ejiri ya na Google Pixels, ya mere o dakọghi na uzo nile di n’uwa. Nke mbụ na tupu ịmalite olile anya anyị, anyị ga-enyocha ndepụta ndị a ọ bụrụ na ngwaọrụ anyị dakọtara na ngwa ahụ.
1 Smartphones dakọtara na Igwefoto Google
2 Etu esi etinye igwefoto Google
3 Kedu ihe igwefoto Google na-enye anyị?
3.1 Lekwasị anya na mmetụta
3.2 Ọhụụ abalị
4 Ihe igwefoto ndi ozo nke Google
4.2 Foto okirikiri
4.3 Nwayọọ nwayọ
4.5 Ama egwuregwu
Smartphones dakọtara na Igwefoto Google
Motorola G5 gbakwunyere
Motorola G5S gbakwunyere
Motorola Otu Ike
Motorola Z2 Gwuo
Motorola G7 gbakwunyere
Ike Motorola G7
Motorola Z3 Gwuo
2 nke Razer
Galaxy S10 (ụdị niile)
Ngwakọta Xiami Mi Mix
Xiami Mi Rịba ama 3
Xiaomi Redmi Rịba ama 5/5 Plus
Xiaomi Redmi Rịba ama 5 Pro
Xiaomi Redmi Rịba ama 7 / Rịba 7 Pro
Nke a bụ Xiaomi Redmi K20 Pro
Ebumnuche ndị a kwekọrịtara ekele nke obodo dị n'azụ ndị mmepe mmepe XDA na-enwe nsogbu ịmegharị ngwa Google na ngwaọrụ ndị ọzọ, ebe ọ bụ na Goolge Ha enweghị mmasị na otu n’ime ihe na-adọrọ mmasị nke ebe Pixel dị na ama ọ bụla.
Onye ọ bụla n'ime nsụgharị dị iche iche nke igwefoto Google maka ụdị niile na ndepụta a dị na njikọ na-esonụ na budata ma wụnye na ngwaọrụ anyị.
Etu esi etinye igwefoto Google
Nke mbụ, anyị ga-aga na njikọ ahụ m tinyere na ngalaba nke gara aga na budata na faịlụ igwefoto kwekọrọ na ngwaọrụ anyị. Ọtụtụ mgbe, ọ dịghị mkpa ka mgbọrọgwụ na ngwaọrụ anyị, ihe na-esiwanye ike ebe ọ bụ na ndị nrụpụta anaghị ahapụ ịnweta usoro dịka ha mere afọ ole na ole gara aga.
Ozugbo anyị ebudatara faịlụ ahụ dị na ajụjụ, anyị ga-ahapụrịrị ntinye nke ngwa ndị na-esiteghị na Storelọ Ahịa Play. Iji mee nke a, anyị ga-aga Ntọala Ngwaọrụ ma nweta ngalaba Nche ma mee ka ịgbanwee ahụ Amaghị mmalite.
Ozugbo anyị wụnye ngwa ahụ, mgbe ịpị ya na nke mbụ, ga-arịọ ohere dị ukwuu maka igwefoto (dị mkpa iji nwee ike iji ya) na usoro nchekwa inwe ike ịchekwa captures na vidiyo anyị na-eme.
Kedu ihe igwefoto Google na-enye anyị?
Ngwa igwefoto Google abụghị naanị na-enye anyị mma n'ọnọdụ ọ bụla, ọkachasị ọnọdụ abalị, mana ọ na-enyekwa anyị ọtụtụ nhọrọ nke anyị kọwara n'okpuru:
Lekwasị anya na mmetụta
Nhọrọ mmetụta nke Focus na-enye anyị ohere ịrụ gbaa na ndabere nke na-elekwasị anya na-enweghị ekwentị anyị nwere ihe karịrị otu igwefoto. Ọ bụrụ na nsonaazụ nke njedebe gị nyere ya na igwefoto abụọ maka ịgbanye ndabere na eserese ahụ, yana ngwa a na ọrụ a, ị ga-enweta nsonaazụ dị egwu.
N'ezie, ọrụ ahụ dị ntakịrị, ebe ị ga-eme yae nwetakwa ngwaọrụ mgbe ị na-ejide ya dị ka ngwa ahụ rịọrọ.
Nke a bụ otu n’ime ụdịdị dọọrọ mmasị ndị mmadụ kemgbe Google malitere ụzọ izizi Pixel mbụ. Nightkpụrụ abalị a na-enye anyị ohere inweta nsonaazụ dị egwu na gburugburu ya na ọkụ ikuku dị jụụ. Ọrụ ahụ zuru oke akpaka, naanị ihe anyị ga - eme bụ ijide mkpanaka maka ihe dị ka nke abụọ, oge ọ ga - ewe iji jide ihe niile dị mkpa iji mepụta onyonyo ikpeazụ.
Nhọrọ igwefoto bụ otu ihe anyị nwere ike ịchọta na ngwaọrụ ọ bụla na ahịa. Na captures ị na-adabere, ka a dị ukwuu, na àgwà nke oghere nke anyị ama. The nhazi rụrụ site weghara ngwa bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụla ọzọ ama.
Nhọrọ igwefoto bụ otu nke anyị ga-ahụ na ọrụ vidiyo, yana nke anyị nwere ike Dekọọ vidiyo ka anyị na-eji ngwa igwefoto nke ama anyị.
Ihe igwefoto ndi ozo nke Google
Nhọrọ a, dị ka aha ya si kọwaa nke ọma, na-enye anyị ohere ịwekọ panoramic captures, ezigbo ọrụ iji were odida obodo.
Nhọrọ a ịmata ihe na-enye anyị ohere ịme okirikiri na-ejide nke ahụ na-enye anyị nsonaazụ dị egwu ma dị egwu.
Ndekọ na ihe karịrị 60 okpokolo agba kwa nke abụọ na-enye anyị ohere ịkwụsị vidiyo iji nye ọnọdụ dị elu karịa ngwa ngwa karịa ma ọ bụrụ na anyị na-akwụsịlata na video playback.
Ọ na-enye anyị ohere ịdekọ vidiyo nke a ga-egwu na ọsọ anyị guzobere na mbụ mgbe anyị na-edekọ ya, ọsọ ọsọ mgbe niile ọ ga-adị elu karịa nkịtị.
Eziokwu gbara ume dịkwa na igwefoto Google site na atụmatụ egwuregwu. Nhọrọ a na-enye anyị ohere itinye ederede, ihe eji achọ mma, ihe odide ijuanya, emoticons ... na vidiyo ma ọ bụ foto anyị na-ese.
N'ime nhọrọ a anyị nwere ihe dị iche iche nhọrọ nhazi nke igwefoto nyere. Site na nhọrọ a, anyị nwere ike gbanwee mkpebi nke igwefoto, nke vidiyo, gbakwunye ụbọchị na oge na njide ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Etu esi wụnye Google Camera na ngwaọrụ gam akporo ọ bụla
Zhiyun SMOOTH-Q2, anyị na-enyocha gimbal kọmpat na-enweghị atụ
Huawei Nova 5T: Nnyocha miri emi na ule igwefoto